Mandràra ny harona plastika i Tanzania, namorona klioba 300 mitaiza tanora hiaro tontolo iainana ireo mpikatroka ao Dar es Salaam · Global Voices teny Malagasy
Mandràra ny harona plastika i Tanzania, namorona klioba 300 mitaiza tanora hiaro tontolo iainana ireo mpikatroka ao Dar es Salaam
Miady amin'ny fako plastika ao aminy ilay tanàna amorontsiraka
Mpanoratra Goodhope Amani Nandika (fr) i Gwenaëlle Lefeuvre, Adrien Taviere, avylavitra
Voadika ny 23 Aogositra 2019 8:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, українська, 繁體中文, عربي, English
Abdalah Nyambi (ankavia) mitsimpona ireo tavoahangy plastika izay ho avadik'izy sy ireo nàmany avy amin'ny fikambanana mpiaro tontolo iainana mba hatao làlana. Sary an'i Goodhope Amani, nahazoana alàlana
Ny 1 Jona 2019, noraràn'ny governemanta tanzaniàna ny fampiasàna harona plastika, nanatevina laharana ireo firenena afrikàna telo amby telopolo hafa miady amin'ny fampiasàna vokatra plastika tsy afaka ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja. Saingy mbola betsaka dia betsaka ireo fako plastika ao amin'ny firenena ary ny sasany amin'ireo tanora mpikatroka ho an'ny tontolo iainana dia manantena fa indray andro any hialàn'i Tanzania tanteraka ny fampiasàna ireo vokatra plastika tsy afaka ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja.
Liberatha Kawamala, 24 taona, vehivavy lohalaharana mpikatroka ho an'ny tontolo iainana avy ao Dar es Salam, renivohitra ara-kolontsain'i Tanzania, mpiasa ambony tao amin'ny resaka fitaterana sy fampitaovana, izy izao no lasa mpitarika ny federasiônan'ireo ivontoerana miisa 300 izay sady fialamboly no miaro ny tontolo iainana, ka ao anatin'ireny ireo tanora no entanina momba ny maha-zavadehibe ny fiarovana ny natiora, miaraka amin'ny fifantohana manokana atao amin'ny loza mitatao aterak'ireo harona plastika fanary amin'ny fifampiankinam-piainana maro, na izany anaty ranomasina, na an-tanety, ao Tanzania :
We need more efforts in making changes.. children of this century should start learning more things as entrepreneur from school practical things,and how the system changes https://t.co/n831CzhcBO
— Liberatha Kawamala (@LiberathaKawam1) July 6, 2019
Mila manao ezaka misimisy kokoa isika mba hitondra fanovàna … ny tanoran'ity taonjato ity dia tokony hanomboka hianatra zavatra misimisy kokoa toy ireo mpandraharaha, miainga avy amin'ny fihetsika mahazatra any ampianarana sy ny fomba fiovan'ny tontolo.
— Liberatha Kawamala (@LiberathaKawam1) 6 Jolay 2019
Ilay tanàna amorontsiraka ao Dar es Salam no tanàna lehibe indrindra ao Tanzania, ary ny fitomboan'ny mponina ao aminy no haingana indrindra. Tamin'ny fanisambahoaka farany tamin'ny 2012, vinavinaina ho 4,3 tapitrisa ny mponina ao. Ny fitantanana ny resaka fako no tena olana goavana ao, indrindra fa any amin'ireo faritra fonenana tsy ara-dalàna izay misy ny 70 hatramin'ny 80 % ireo mponina an-tanandehibe ao amin'ny firenena, tsy misy fotodrafitrasa fototra sy ireo tolotra rehetra ho fanangonana ny fako.
Ireo Antontanisa nasiônaly momba ny tontolo iainana tamin'ny 2017 dia maneho fa ny fako vokatra isanandro ao Dar es Salam tamin'izany taona izany dia nanodidina ny 4.600 taonina, ary io tatitra io ihany koa no efa naminavina fa hahatratra 12.000 taonina isanandro izany hatramin'ny 2025.
Moron'i Msimbazi ao Dar es Salam, tondraky ny fako plastika. Sary an'i Goodhope Amani, nahazoana alàlana
Ny Novambra 2018, natrehan'i Liberatha Kawamala ny fampirantiana Taokanto, ny fahaizamamorona ary ny zavabaovao ho an'ny fampandrosoana maharitra, nokarakarain'ny sampan'ny Firenena Mikambana ao Tanzania tao Dar es Salam, ary fanantenany tamin'izany ny hihaona amin'ireo olona hafa mitovy fahatsapàna aminy. Dia nifanenana tokoa tamin'i Abdalah Nyambi, mpianatra iray 26 taona manomana lisansa ary mamorona voninkazo plastika natao avy amin'ny akora naverina nahodina indray.
Nanapaka hevitra ny hiaraka hiasa ry zareo hanova ny fomba fisainain'ny tanora ny fako plastika.
Mba hahatanteraka izany dia niarahan'izy ireo najoro ny Fikambanan'ny Tanora sy ny Fanodinana ny Plastika (PREYO) ary kendrena ny hiterahan'izany fidirambola avy amin'ireo vokatra naverina namboarina, no sady mampianatra hatrany ireo tanora momba ny maha-zava-dehibe ny fitahirizana ny natiora amin'ny alàlan'ireo ivontoerana fialamboly miaro ny tontolo iainana. Manazava i Liberatha Kawamala :
Nianatra ny resaka fampitaovana sy ny fitantanana ny fitaterana aho, saingy nitondra ahy ho any amin'ny resaka tontolo iainana ny zavatra tiako sy mahaliana ahy. Olona marobe no manontany ahy hoe fa maninona no fampitaovana, [satria] tsy mifandray amin'ny resaka tontolo iainana izy io. Dia valiako hoe raha toa ianareo ka liana sy tia zavatra iray, dia tsara kokoa ho anareo ny manao an'izany.
Ao Dar es Salam, Tanzania, Liberatha Kawamala (ankavanana) sy ireo nàmany mampiseho ireo ampahan-dàlana vita avy amin'ny fako plastika. Jona 2019. Sary an'i Goodhope Amani, nahazoana alàlana
Saika laniny hikatrohana ho an'ny fitahirizana ny natiora ny fotoana ananany. Nifanome tànana tamin'ireo fikambanana toy ny Ivontoerana Jane Goodall izy mba hanangana toerana telo fialamboly any anaty sekoly ambaratonga fototra, toerana ampianarany rahateo ny lanjan'ny fitahirizana ny natiora, ny fanaovana zaridaina, ny fambolena hazo, ny ady atao amin'ny fako plastika ary ny fikirakiràna sahaza atao amin'ireo fako.
Ny ivontoerana fialamboly sady miaro ny tontolo iainana ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra ao Makumbusho, iray amin'ireo 300 ao Dar es Salam,Jona2019. Sary an'i Goodhope Amani, nahazoana alàlana
We need collective actions against plastic waste. As rural-urban migration is increasing, let's nurture our kids to see the need for conserving the environment. @LiberathaKawam1 @OlumideIDOWU @JMakamba @UNEnvironment @IGEReport @Alvaro_UNTZ @ElkanaCK pic.twitter.com/zs29Hz07Oc
Ilaintsika ny manao hetsika iarahana hanoherana ny fako plastika. Mitombo ny fandosirana ny faritra ambanivohitra, noho izany ndeha isika hampianatra ny zanatsika hijery ny filàna miaro ny natiora.
— goodhope (@goodhopepraygod) 4 Jolay 2019
Manokatra ny varavaran'ny fandraràna ny plastika i Tanzania
Tamin'ny fiandohan'ny May 2019, nambaran'ny Praiminisitra Kassim Majaliwa ny fandraràna ny plastika tsy afaka ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja tsy ho azo ampiasaina manomboka ny 1 Jona, manaraka ny ohatra nomen'i Kenià sy Roandà. Tanzania no firenena afrikàna faha-34 nametraka fandraràna ny plastika, ary araka ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana momba ny Tontolo Iainana, io tanibe (kaontinanta) io no tena mavitrika indrindra amin'ny fandraisana fepetra tahàka izany eto .
M. Kajaliwa nilaza fa tsy ara-dalàna, manomboka ny 1 Jona 2019, ny mividy, mivarotra ary manafatra ireo karazana harona plasitika rehetra, araka izay voalaza ao amin'ny Lalàna 2019 momba ireo Harona Plastika. Izay olona manamboatra na manafatra harona na fonosana plastika dia mety hiharan'ny sazy ara-bola tafakatra hatramin'ny 1 lavitrisa shillings tanzaniàna (eo amin'ny 388.000 euros) sy/na fampidirana am-ponja mandritra ny taona roa. Araka ny lazain'ny The Citizen, ny fitazonana sy fampiasàna ho an'ny tena samirery dia mety hahazoana sazy ara-bola roa hetsy shillings (eo amin'ny 89 euros) sy/na fanibohana am-ponja mandritra ny andro fito.
Nohamafisin'ny solombavambahoaka January Makamba tao amin'ny Twitter io lalàna manan-tantara io :
Fanamarihana Ofisialy avy amin'ny governemanta ho an'ireo mpivezivezy mihevitra ny hitsidika an'i Tanzania, tohin'ilay fandraràna ny harona plastika.
— January Makamba (@JMakamba) 15 May 2019
Mitehaka ireo Tanzaniàna maro mpampiasa aterineto :
Mirehareha amin'i Tanzania tanindrazako izay nanambara fa hihatra hanankery ny fandraràna ny harona plastika tsy mety ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja. @JMakamba , andrasako fatratra ny fanavaozambaovao misimisy kokoa momba ity fivoarana mampientanentana ity !
— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) 9 Aprily 2019
Monica Adam Mgata dia ankizivavy mpianatra amin'ny ambaratonga fototra, sady mpikambana ao anatin'ilay klioba mpiaro tontolo iainana ao amin'ny sekoly misy azy, ny klioba “Roots and Shoots” [Faka sy Tsiry]. Resy lahatra izy fa azon'ireo mpianatra atao ny hitondra anjara biriky betsaka ho fiarovana ny tontolo iainana ary ny fandraràna ny fampiasàna harona plastika dia efa fizorana mankamin'ny làlana tsara :
Fotoana ela no ilaina vao levona ny harona plastika ary miantraika amin'ny fahafahan'ny tany hamokatra. Toroako hevitra ireo mpiara-mianatra amiko mba tsy hampiasa harona na tavoahangy plastika tsy afaka ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja.
Araka ny tatitra iray tamin'ny 2018 an'ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana momba ny Tontolo Iainana, maminavina ireo manampahaizana manokana fa hatramin'ny 12 lavitrisa taonina ny fako plastika hisy hatramin'ny 2050, raha tsy misy fandraisana andraikitra apetraka mba hitantanana sy hamerana ny famokarana izany.
Tsy levona velively ny ankamaroan'ireo harona plastika tsy afaka ampiasaina afa-tsy indray mandeha monja, mandoto ary manova ny fifampiankinam-piainana an-tanety sy an-drano koa izy ireny.
Ireo mpianatry ny lisea Canosa, nianatra ny tantara, ny tombony, ny lafy ratsy, ny karazana rehetra amin'ireo plastika ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro, ny fomba hamerenana manodina azy ireny sy ireo tavoahangy plastika ho amin'ny endrika hafa, ary ny fahatakarana bebe kokoa an'i Tanzania.
— Liberatha Kawamala (@LiberathaKawam1) 14 Jona 2019
Abdalah Nyambi mihevitra hoe mahaliana sy tian'ny vahoaka ny tontolo iainany, saingy ilainy ny mahazo fanabeazana momba izany, indrindra fa rehefa resaka tombontsoa azo avy amin'ny fiarovana ny natiora no resahana :
Tsy ampy fahalalana ny olona. Raha toa isika manomboka mampianatra an-dry zareo, heveriko fa hifankahazatra amin'ny resaka olana ara-tontolo iainana ry zareo ary ho lasa [mpandàla] ny fandrosoana lovainjafy.
Nandika (fr) i Adrien Taviere